Perikopa (Mg)| Page 29
Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento * 07-12 Desambra 2015
4 décembre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
“Andriamanitra manangona ny olony “ Fitarihan-kevitra ankapobe: Ny fiavian’ny Mesian’Andriamanitra dia ny hanangonany ny olony. Hoy Jesosy izay tsy mahafoy ny ondriny: « Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry » Jao.10:16. … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento 30 Novambra-05 Desambra 2015
30 novembre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
“Andriamanitra mamangy ny olony“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Fanekena ambony sady masina indrindra no nataon’Andriamanitra tamin’ny olony, dia ny « faneken’ny fitiavany mandrakizay » izay tsy hahafoizany ny olony ka nitenenany taminy manao hoe: « Mpanompoko hianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako » Isa.41:9. Nataony ho azy ireo ny famangiany, kanefa koa ho an’izao tontolo izao izay tiany hovonjena, mba … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XXV manaraka ny Trinite 23-28 Novambra 2015
25 novembre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
“Andriamanitra mihazona ny fanekeny” Fitarihan-kevitra:. Andriamanitra dia « Andriamanitry ny fanekena » satria Mahatoky sy Marina Izy (Apok.19:11) ka mihazona ny fanekeny, ary tsy tia ny fivadihana amin’izany (Jer.11:10)). Anaovany fanekena tokoa ny olony, satria Andriamanitra tia sady saro-piaro Izy, izay nandidy hoe: » Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany » Eks.20:3. Ho avy Jesosy hamangy ny olona … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XXIV manaraka ny Trinite 16-21 Novambra 2015
18 novembre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
“Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra:. Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra satria Andriamanitra no mampandresy azy. Izany dia amin’ny alalan’ny finoany an’i Jesosy Kristy Zanany izay efa nandresy ny sarotra sy mafy indrindra, dia ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana, ary miaraka amin’izany koa ny ota izay fanindronan’ny fahafatesana (1 Kor.15:56). Hoy Jesosy: “Satria velona … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XXIII manaraka ny Trinite 09-14 Novambra 2015
9 novembre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
« Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra » Fitarihan-kevitra: Ny fanjakana ankasitrahan »Andriamanitra dia izay manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra, ka mampanjaka ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoa ny mpiara-belona. Jesosy Kristy, Ilay Mpanjaka Mahatoky sy Marina sady Andrian’ny fiadanana no ivony sy foto-piorenany. Hoy Izy: « Fiadanana ho anareo » Jao.20:19,21. Alatsinainy 09: Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra. « Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan’ny … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XXII. manaraka ny Trinite * 02-07 Novambra 2015
3 novembre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
“Andriamanitra no Tompo“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra no Tompo ka manao famaliana sy mitsara. Ary dia mamaly ny olona araka ny asany Izy.Tsy tia antsika mpanota ho very anefa Izy, koa dia manao fahamarinana ho antsika amin’ny alalan’ny fanavotana antsika, dia ny famelana ny helontsika sy ny fanamasinana antsika. Tanteraka izany ho an’izay rehetra mahatsiaro mibebaka … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XXI manaraka ny Trinite 26-31 Oktobra 2015
30 octobre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
“Fantaro Andriamanitrao“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Fantaro Andriamanitra sady Andriamanitrao. Ao aminy ny fahatanterahana sy ny fahatsarana rehetra; ary ao Aminy indrindra no misy ny tokim-pamonjena na ho amin’tiy fiainana ity na ho amin’ny ho avy, dia fiainana mandrakizay. Hoy ny Tompo: “Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite * 19-26 Oktobra 2015
21 octobre 2015 by mpiandraikitra	Leave a Comment
PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO « Mitadiava an’Andriamanitra » Fitarihan-kevitra ankapobe: Andro itadiavana ny Tompo tokoa izao, satria andro mahory (2 Tim.3:1). Fa manaiky ho hitan’izay mitady Azy tokoa Izy. Ary raha ny marina, dia Izy mihitsy no mitady ny olona rehetra mba hahita Azy. Hoy Jesosy: « Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very » … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite * Oktobra 12-10-15
PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO « Andriamanitra manavotra ny mpanota » Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra tsy mahafoy ny olona ho very ka manao fanavotana ho azy. Hoy Izy: « Tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy » Ezek.33:11. Ho an’izay tsy mbola mahalala izany planim-panavotan’Andriamanitra izany dia mbola miala nenina … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite * Oktobra 05-10-15
PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN‟ANDRO » Matahora an’Andriamanitra » Fitarihan-kevitra ankapobe: « Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahalalana » Oha.1:7a. Izany dia ny fanekena Azy ho Tompo sy ny fankatoavana ny teniny. Manda fiarovana amin’ny andro mahory izany (2 Tim.3), dia ny androm-pihemorana, andron’ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fanaranam-po, kanefa koa andron’ny fitsaran’Andriamanitra (2 Pet.2:3). Toy izany … [Read more…]
« Précédent 1 2 3 4 5 … 25 26 27 28 29 30 Suivant »